501 ၀ယ်နေတာနော် ဟွင်းဟွင်း ( မမှီလိုရယ်တာ )
ဘန်ကောက်က မြန်မာတွေအတက်များတဲ့ တက္ကသိုလ်တခုမှာ
ဒီနေရာက လာတဲ့သူတိုင်းမရိုက်မဖြစ် တနေရာပေါ့
ဂရန်းပဲလေ့လို့ခေါ်တဲ့ လက်နှက်အစုတ်တွေပြတဲ့ ပြတိုက်က အောက်မှာရှိနေလေရဲ့
ရန်ကုန်မှာ ၂၆ သိန်း၊ ဘန်ကောက်မှာ ဘတ် ၂၀ တွက်သာကြည့်
ဒါက လိုင်းဆွဲနေတဲ့ ဂိတ်တွေပြတာ သေချာဖတ်နော်
အဲဒီမှာ မြန်မာတွေ များတယ်- ၀ယ်ချင်ရာကိုပြော ၊စားချင်ရာကိုပြော မြန်မာတယောက် ယောက်ရှိနေတယ်
လိုင်းသင်္ဘော ပေါ်က ခရီးသည်
ခေါက်ဆံလမ်းအ၀င်မှာ မိန်းမဖို့ ၀ယ်မယ်ဆိုရင်တပြုံဘဲ
လူတွေစုံတဲ့ ခေါက်ဆံ (စုံမှာပေါ့ အာရှကရော ဥရောပ ကပါ လာတဲ့သူတွေ ငွေ ကုန် ကျေး ကျသက်သာ တဲ့ ဒီနေ ရာမှဘဲ စတည်းချနေကြတာကိုး၊ စုံလဲစုံ ဈေးလဲသက်သာ ကဲဘာလုပ်မှာလဲ၊ ဒါက ဘန်ကောက်ရဲ့ အသည်း ကျော်တခုပါ)
လေဆိပ်သွားတဲ့ ကားလက်မှတ်က အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတာကိုး
တခု ဘတ် ၆၀ တဲ့ တကယ်ပြောတာ
ဒါက စည်းချက်ညီညာ သီချင်းတီရှပ်
၀ယ်ထားတဲ့သက်သေဘဲ ဟွင်းဟွင်း (မမှီရယ်သလို)
ကျွန်တော်နဲ့အဘထ (သေချာကြည့်နော် )
တက်လိုက်ဆင်းလိုက် မြောင်းဘုတ်လိုက်( မြောင်းဘုတ်ဆို တာ ဘန်ကောက်ရဲ့ ရေဆိုးမြောင်းထဲမှာ ဆွဲတဲ့ ဘုတ်တွေကိုပြောတာပါ။ နံပေမယ့် ကားပိတ်တဲ့ ဒဏ်ကိုခံစရာမလို မြန်တယ် နံတယ် ဘာမှတ်လဲ )
ပြီးတော့ အဲဒါလေးသွားစားသေးတယ် ( အ၀စား၈၉ ဘတ်ဗျ တန်မှတန် - ရောက်တိုင်း တခါတော့ ရအောင်စားတယ် - တန်နွန်းနို့)
အော်- ဒါနဲ့ - အိမ်သာထဲမှာ ကွန်ဒုံး ၀ယ်လို့ရတဲ့ စက်တွေရှိတယ်( ကဲသာကဲ )
ဘက်စ် ကားစီးဖို့တန်းစီနေတာ ( ဆူးလေက လိုဘဲ )
ဆင်းဂါး ဘီယာ ဝေါ့ အေ့
ကောင်တာ တွေက ကြောက်စရာ
အင်တာနက်သုံးမလား ဖုံးဆက်မလား နိုင်ငံတကာကို
တခါသုံး ၁၀ ဘတ်ဆို ၁၅ မိနစ် အင်တာနက်
ကျွန်တော် ဘန်ကောက်ကိုရောက်တာ ဒါနဲ့ဆို သုံးခါရှိပြီ။ ဒီတခေါက်မှဘဲ မြဘုရားရောက်တော့တယ်။ သူငယ် ချင်း တွေက တားနေလျှက်နဲ့ ရောက်အောင်သွားခဲ့တာ ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘုရားတော့ ဒီတခါရအောင်ဖူးမယ်လို့ ပေါ့။ နေပူငွေကုန်ပေမယ့် တကယ်ကို စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မြဘုရားတော့ ရောက်ခဲ့ပြီ။ ပုံတွေ အရင် ကမတင်ဖြစ်ပေမယ့် ဒီတခါတော့ ကြွားတယ်ထင်ထင် မျှလိုက်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေကိုတော့ အားရပါးရ ကြည့်သွားတယ်
ကဲသာကဲ ဆိုတောလေးက ဘယ်လို ကဲရမှာလဲ ဟတ်ဟတ်... ကောင်းတယ်ဗျာ အဲ့လိုလေးတွေ တင်ထားတာ..
ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကောင်းတယ်ဗျာ။ မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတွေဆိုတော့ ကြည့်လို့ကောင်းသလို၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။ ဒါနဲ့ အိမ်သာထဲမှာ ကွန်ဒုံးရောင်းတာတော့ တမျိုးပဲ။ အင်း.... အဆင်ပြေတာပေါ့။
-ဒါနဲ့ အိမ်သာထဲမှာ ကွန်ဒုံးရောင်းတာတော့ တမျိုးပဲ။ အင်း.... အဆင်ပြေတာပေါ့။ The same thing in Britain.
ကြွားချက်ကတော့ လက်လံပါ့ပေ မောင်ဇော်ဇော်ရယ်
true said...ကြွားချက်ကတော့ လက်လံပါ့ပေ မောင်ဇော်ဇော်ရယ်
You must be joking. He just sharing. Posting photos taken in Bangkok is boasting? I dont think so. :)
နောက်ခါ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ ပဲပေးနော်။
ခုက တစ်ပုံစံထဲ ဖြစ်နေတယ်
(နောက်တာ :P )
nice photos with pleasant views(if u not include)
ဘိုင်ဒဝေး မမှီရယ်တယ်ဆိုတာ ခုံခုပီးရယ်တာကိုပြောတာလား ဟွင်းဟွင်း(အဲဒါ ကိုတက်စ်ဆီက အမွေကွ)
၉၉ စနေလာတုံးကတော.ပိုက်ပိုက် မရှိဘူးဆို….ဆို..
ကြွားတယ်ထင်လဲ မမှားဘူးပေါ့ဗျာ။ ၃ ခေါက်ရောက် တာ ဒီတခါဘဲတင်ပါသေးတယ်။ အရက်မူးမူးနဲ့တင်လိုက် တာ အဲဒီလောက်ပုံတွေ များသွား တာဘဲဗျ။ လာရောက်ပြီး ကွန်မန့်ချီးမြင့် ကြတာကျေးဇူးနော်။
ကိုစတိအဲဗားဂရင်းတို့ ကိုမီထရိုတို့မင်္ဂလာပါ။ မမေရေ တုတ်တုတ်တော့ ရောက်တာနဲ့စီးတာဘဲ မှောက်မှာ ဆိုးလို့သိပ်မစီးရဲ၊ ကိုသူတော် မမီလိုရယ်တာ စိတ်မဆိုးနဲ့နော် အတုခိုးတာ ၊ ခင်ခင်ဦးမေရေ မ၉၉ လာတုန်းက နားကားနေတာ ဗျ။ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။
သံလွင် HeRo said…